Uluhlu lukaRobinson, lahla iifowuni zeshishini! | Bezzia
Uluhlu lukaRobinson, lahla iifowuni zeshishini!
Ngaba udiniwe kukufumana iminxeba evela kubathengisi kunye nabasebenzi befowuni kumnxeba wasekhaya? Ngaba ifowuni yakho iphinda ikhale ngeeholide ukuze ikunike iinkonzo ongazicelanga? Uluhlu lweRobinson likuvumela, ngokulula kwaye simahla, ziphephe iintengiso zenkampani apho ungakhange unike imvume yakho yokuthumela intengiso.
Uluhlu lweRobinson yinkonzo yasimahla kuluhlu lukabani nabani na onokujoyina kwaye esebenzela intengiso ngefowuni, iposi, i-imeyile kunye neSMS / MMS. Ukwenza oko kuya kukuthatha nje imizuzu emihlanu kwaye uya kufumana uxolo lwengqondo. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi?
1 Yintoni uLuhlu lukaRobinson?
2 Ndingena njani kuLuhlu lweRobinson?
3 Ukurhoxiswa kunye nokuChaswa
Yintoni uLuhlu lukaRobinson?
Yinkonzo yokukhutshwa kwentengiso yasimahla, efumaneka kubathengi, ejolise ekunciphiseni inani lopapasho abalufumanayo. Nabani na obhalisiweyo kolu luhlu ugwema ukufumana unxibelelwano lwezorhwebo ngeefowuni, i-SMS, i-imeyile, iposi okanye ubuso.
Uluhlu lweRobinson yinkonzo yentengiso yokuphuma yasimahla ebonisa i ukuqatshelwa kwe-AEPD (I-Arhente yaseSpain yoKhuseleko lweDatha) kwaye ilawulwa nguMbutho waseSpain woQoqosho lweDijithali. Lo mzimba uzalwa kwisivumelwano semvumelwano phakathi kweenkampani ezininzi ezizezeSpanish Association of Digital Economy (ADIGITAL) kwaye, ngaloo ndlela, zithatha ukuhlonipha isicelo sommi obhalisiweyo kule fayile ukuba angabi ngumamkeli wokupapashwa. .ongakucelanga ngokucacileyo. Ngaphandle koko, ezi nkampani zinoxanduva lokuxelwa kwi-AEPD.
Ndingena njani kuLuhlu lweRobinson?
Nawuphi na umntu wendalo Ungajoyina uluhlu lweRobinson ngokuzithandela kwaye ngaphandle kwentlawulo. Kwimeko yabantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-14 ubudala, nangona kunjalo, abazali babo okanye abagcini babo kuya kufuneka bazalise ifom enikezelwe yiwebhusayithi ngokwayo.
Ukubhalisa, konke okufuneka ukwenze kukucofa iqhosha kwiphepha lasekhaya. "Joyina uluhlu" kwaye ulandele imiyalelo. Kufuneka kuqala ukhethe ukuba ufuna ukuzibhalisela okanye umntu ongaphantsi kweminyaka eli-14 ubudala kwaye ugcwalise ifomu nayo yonke idatha yakho. Emva kokwenza oko, uya kufumana i-imeyile enekhonkco lokuqinisekisa ubhaliso lwakho kwaye, xa sele ugqibile, uya kuba nakho ukungena kumajelo ongafuni ukufumana intengiso kwiphaneli yakho yokhetho. Isishwankathelo:
Ngena kwiwebhusayithi kwaye ucofe "Joyina uluhlu."
Khetha "Me" okanye "Komnye umntu" ukuba unqwenela ukongeza umntu ongaphantsi kweminyaka eyi-14 kuluhlu.
Gcwalisa ifom ngedatha yakho kwaye ucofe ku "bhalisa"
Yiya kwibhokisi yakho ye-imeyile, uya kufumana i i-imeyile yokuqinisekisa ngekhonkco lokuqinisekisa iakhawunti yakho.
Kwiwebhu cofa u-"Fikelela" ukuze uzazise wena kunye nephaneli yakho khetha ukhetho lwakho.
Ukuba ubhalisiwe kuluhlu, njengoko kuchaziwe kuMthetho woKhuseleko lweDatha, iinkampani ongakhange unike imvume yakho kwaye ungeyena umxhasi wazo aziyi kukwazi ukukuthumelela intengiso kuyo nayiphi na imeko. Nangona kunjalo kusoloko kukho abo bafumana i-nook yelifa wenze umthetho wenze umgibe. Babona bancinci kodwa uya kufuna ezinye iingcebiso zokuziphepha.
Ukurhoxiswa kunye nokuChaswa
Kuthekani ukuba ndiyinike imvume yam kwinkampani kodwa ngoku ndifuna ukuyirhoxisa? Ungayenza kwiphaneli yakho yokhetho apha "Ukurhoxiswa kweefowuni". Oku kuya kubonisa inkampani oyinike imvume yakho ukuba awusafuni kufowunela intengiso.
Kwenzeka ntoni ukuba inkampani endingakhange ndiyinike imvume yam inditsalele umnxeba? Kwifowuni nganye unelungelo loku yazisa inkampani ukuba awufuni kuphinda ufumane ezinye iintengiso kwelakhe icala. Xa oku kusenzeka, inkampani kufuneka igcine idatha enxulumene nokurhoxiswa komsebenzisi unyaka omnye kwaye isebenze idatha yabo yobuqu ngokuthobela imimiselo yomthetho yangoku.
Ukuba kunjalo inkampani iyaqhubeka nokwenza kwaye isebenzise iphulo layo lentengiso ngokuchasene nentando yakho, yixele! Ukusuka kwi-OCU babonisa ukuba ukubeka a isikhalazo sobugwenxa kunye neentengiso zentengiso malunga nokusetyenziswa kwedatha yakho ngabantu besithathu sesona sisombululo sisebenzayo.
Ngaba ibe luncedo kuwe? Ngaba ubusazi uluhlu lweRobinson?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Uluhlu lukaRobinson, lahla iifowuni zeshishini!
Emva: I-saga yeemuvi eziza kubonwa kwi-Amazon Prime
Buñuelos, izimuncumuncu zesintu